आँचल शर्मा - सौन्दर्य - प्रकाशितः वैशाख १४, २०७९ - नारी
वैशाख १४, २०७९ तपाईं कसरी केशको स्याहार गर्नुहुन्छ ?
सातामा दुई दिन प्यारासुट तेलले मसाज गर्छु । मसाज गर्दा धेरै तेल प्रयोग गर्दिन । धेरै तेल लगाउँदा स्याम्पु पनि धेरै प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले केश झनै सुख्खा हुन्छ । समयको अभाव हुने भएकाले पनि म केशलाई त्यति धेरै स्याहार–सुसार गर्दिन ।
तपाईंको केश कुन प्रकारको हो ?
मेरो केश सामान्य प्रकारको हो ।
केशमा कस्तो समस्या छ ?
हल्का केश झर्ने समस्या थियो । सुटिङमा गइरहनुपर्दा दिनहुँ केशमा केमिकल प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले केश ढिलो बढ्ने समस्या छ ।
कस्तो किसिमको हेयर कट रुचाउनुहुन्छ ?
मलाई लामो केश मनपर्छ । तर केश चाँडै नबढ्ने समस्या भएकाले छोटो हेयर कट गर्छु । मलाई ‘इक्वेल लेन्थ’ भएको केश मनपर्छ ।
तपाईले प्रवर्द्धन गर्नुभएको ब्रान्ड कस्तो हो ?
यो पहिलेदेखि स्थापित भइसकेको ब्रान्ड हो । हाम्रा हजुरआमा, आमा एवं दिदीबहिनीहरूले पनि यही ब्रान्डको तेल प्रयोग गर्नुभएको हो । मैले पनि यही तेल प्रयोग गरिरहेकी छु । कम्पनीले स्याम्पु पनि बजारमा ल्याएको छ । केशमा एउटै ब्रान्डको तेल र स्याम्पु प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
भाद्र १४, २०७७ - ‘आँचल अन्दाज’
भाद्र १४, २०७७ - "पद्य र गद्य लेखनका आ–आफ्नै सामर्थ्य" - शारदा शर्मा, साहित्यकार
फाल्गुन १२, २०७६ - कलाकार जयाको ड्रिम वाक २०३३ मा